त्रिविमा नक्कली परीक्षकले लगे २१ लाख! - Everest Dainik - News from Nepal
काठमाडौंः नक्कली परीक्षकका नाममा त्रिभुवन विश्वविद्यालय परीक्षा नियन्त्रण कार्यालय बल्खुबाट २१ लाख १७ हजार भुक्तानी भएको छ । ०७५ असोजअघि डेढ वर्षमा नक्कली परीक्षक खडा गरी यो रकम हिनामिना भएको हो । परीक्षा नियन्त्रक पुष्पराज जोशीले डेढ वर्ष अवधिमा नक्कली परीक्षक खडा गरेर २१ लाख १७ हजार हिनामिना भएको बताए । नक्कली कागजात र भौचर बनाएर धेरै व्यक्तिको नाममा रकम लगिएको देखिएको उनले बताए ।
याे पनि पढ्नुस स्ववियु निर्वाचनमा भाग लिन्छौंः नेविसंघ अध्यक्ष ढुङ्गाना
त्यतिवेला परीक्षण गरेको उत्तरपुस्तिकाको संख्यासहित भौचर ल्याउनेलाई चेकमार्फत भुक्तानी दिने थियो । केवल रसिदको भरमा नगद कारोबार हुँदा हिनामिना भएको त्रिविका पदाधिकारीहरू स्विकार्छन् ।
याे पनि पढ्नुस त्रिवि उपकुलपति सिफारिस गर्न ‘सर्च कमिटी’ गठन
यो घटनाअघि कति रकम हिनामिना भयो भन्ने हिसाब भने पनिकासँग छैन । ‘अहिले कसले भुक्तानी लगेको हो भन्ने पत्ता लाग्यो भने अरू पनि खोजी गर्छौँ । कहिलेदेखि रहेछ भन्ने आशंका मेटाउन पनि थप छानबिन गर्छौँ,’ परीक्षा नियन्त्रक जोशीले भने ।
नक्कली परीक्षक खडा गरेर रकम हिनामिना भएपछि पनिकाले अहिले भने बैंक खातामार्फत कारोबार गर्न थालेको छ । उत्तरपुस्तिकाको भौचर विभिन्न संकाय र तहको गोप्य शाखामा संकलन गरेपछि लेखाले सम्बन्धित व्यक्तिको खातामा रकम जम्मा गरिदिन थालेको छ । नियन्त्रक जोशीले शाखाबाहेक अन्यत्रबाट भौचर नजाने तथा गोप्य र लेखामा दोहोरो भेरिफिकेसन गरेर मात्र भुक्तानी रकम सीधै खातामा जम्मा गर्ने सिस्टम बनाएको बताए । अब चुहावट रोकिने त्रिवि पदाधिकारीहरू बताउँछन् । यो समाचार आजको नयाँ पत्रिका दैनिकबाट लिइएको हो ।
याे पनि पढ्नुस प्राणी शास्त्रका प्राध्यापक आन्दोलित
ट्याग्स: त्रिभुवन विश्वविद्यालय प्राणी शास्त्र, त्रिवि, नक्कली परीक्षक
६३ सहसचिवको सरुवा, को कहाँ पुगे? (सूचीसहित)
काठमाडौंमा बलात्कार आरोपमा २ युवक पक्राउ
अब १ जनाको नाममा २ भन्दा बढी सिमकार्ड नपाइने
मेलम्ची खानेपानी आयोजना सम्पन्न, छिट्टै उद्घाटन गर्दैछौं : मन्त्री मगर
आज ललितपुरका २ र भक्तपुरका १ जनामा कोरोना पुष्टि
काठमाडौंमा आज २७ जनामा कोरोना पुष्टि